avy amin’ny minisiteran'ny fiarovam-pirenena (MDN) izay notarihin’ny Jeneraly Richard Rakotonirina, niaraka tamin'ny minisitry ny filaminam-bahoaka sy ny minisitry ny fitsarana ary ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria sy ireo tompon’andraikitra maro. Nahazo ny moto ny polisim-pirenena. Ho an’ny tafika ireo "zodiac" sy "vedette rapide". Tanjona ny hahafahana mitandro ny filaminana ary hanafoanana tanteraka ny kidnapping araka ny vinan’ny filoham-pirenena. Nisaotra sy nankasitraka ny minisiteran’ny fiarovam-pirenena moa ny jeneraly Ravalomanana tamin’ny fanolorana ireo fitaovana ireo. Ny fanomezana fitaovana ohatr’izao dia mampitombo ny risi-po hananan'ireo zandary manatanteraka ny asa any ifotony ka mampihorohoro ireo jiolahy, hoy izy. Ny tanjona iraisana dia ny hampandry fahalemana ny firenena hiadanan’ny vahoaka Malagasy ary ny jiolahy no fahavalo iraisana.